Somaliya oo ku biirtay dalalka Difaacaya Xariga China ku heyso Muslimiinta! • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Somaliya oo ku biirtay dalalka Difaacaya Xariga China ku heyso Muslimiinta!
Somaliya oo ku biirtay dalalka Difaacaya Xariga China ku heyso Muslimiinta!
July 31, 2019 - By: Khalid Yusuf
Wadanka Soomaaliya ayaa kamid noqday dalalka difaacay xabsiga iyo Raafka ay dowlada China ku heyso muslimiinta laga tiro badan yahay ee dalkaasi.
Qoraal ay saxiixeen 37 wadan oo ay Soomaaliya ku jirto oo u badan Afrikaan iyo dalalka Aasiya ayaa lagu difaacay siyaasada dowlada Shiinaha ee ku aadan muslimiinta ku nool gobalka Xinjiang.
Arrintan ayaa keentay in dalalka Reer Galbeedka ay cambaareeyaan falalkan ay dowlada Shiinaha ku heyso muslimiinta, horaantii bishan Luulayo ayey dalal u badan kuwa EU-da qoraal ay u gudbiyeen Golaha Qaradamada Midoobay xaquuqul Insaanka u qaabilsan ku cambaareeyeen ololaha Dowlada China ay ku cadaadineyso muslimiinta Xinjiang.
Waxaana kamid ahaa dalalkaasi u dooday xaquuqda Muslimiinta China:
Balse waxaa la yaab noqotay maalmo kadib inay iyaguna waraaq kale ka dabo qoreen dalal gaaraya 37 oo u badan Muslimiin oo ay hogaamineyso Boqortooyada Sacuudiga, dalalkaasi oo difaacaya dowlada China oo ay la leeyihiin xiriir ganacsi iyagoo difaacay gabood-falada China ku heyso muslimiinta ku nool dalkeeda.
Dowlada Soomaaliya ayaa kamid ah wadamada doonaya inay xiriir fiican oo ganacsi la yeeshaan dowlada China, waxayna noqoneysaa markii ugu horeysay in muddo ah oo ay dowlada Soomaaliyeed difaacdo siyaasada China ee ka dhanka ah muslimiinta ku nool dalkeeda.